हवल्दारको श्रीमतिलाई सिपाही मन परेपछि! २ छोराछोरी छोडेर हिडिन्, परिवारले गु’हारे मिडिया (भिडियो हेर्नुस्) – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/हवल्दारको श्रीमतिलाई सिपाही मन परेपछि! २ छोराछोरी छोडेर हिडिन्, परिवारले गु’हारे मिडिया (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । युट्युव च्यानलमा आजकल धेरै पारिवारिक कुरा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । समाजमा हुने गरेका पारिवारिक कुराहरु युट्युव र सामाजिक सञ्जालमा छाउन थालेका छन् । यस्ता घ’टना सामाजिक सञ्जालमा छाउन थालेका छन् । उदयपुरमा एक जना महिला (शसस्त्र प्रहरीका पूर्व वरिष्ठ हवल्दार) को श्रीमति अर्कै रोजेर हिडेपछि उनका परिवारले सो घ’टना मिडियामा ल्याएका हुन् ।
महिला अर्का एक जना सिपाहीसंग गएको भन्दै परिवारका सदस्यले आरोप लगाएका छन् । रुपा वस्नेत नाम गरेकी ति महिलाका श्रीमान भने वैदेशिक रोजगारीका लागि वाहिर छन् । श्रीमान नभएका बेलामा आएका एक जना पुरुष (सिपाही) रुपाकै घरमा बसेका थिए । ति सिपाहीसंग अर्को महिला पनि आएकी थिइन् । आफ्नो जेठानीको घरमा पुरुष आएको देखेर उनले अन्य आफन्तलाई जानकारी दिएकी थिइन् ।
जेठाजु नभएको बेलामा त्यो दाई एक जना अर्को केटीसंग आएका थिए । उनी झोला सहित एक तिर छोरा र अर्को तिर छोरी बोकेर उनै पुरुषसंग गएको आफुले देखेको बताएकी छन् ।ति पुरुषसंग आफ्नो जेठानी दिदी बसेरसंगै खाएको र उनीसंगै गएको आफुले देखेको देउरानीले बताएकी छन् । अहिले छोराछोरी भने माइतमा बसेको आफुले थाहा पाएको बताएकी छन् । तर अहिले ति जेठानी कहाँ छन् भन्ने आफुहरुलाई थाहा नभएको बताएकी छन् । आफ्नो जुठाजु नआउँदा सम्म उनीहरुको घरको जिम्मेवारी लिएर बसेको पनि बताएकी छन् ।